China Cosmetics additives Ukwakha kunye nefektri | Yihoo
Kule minyaka idlulileyo, ngokukhawulezisa ukwenziwa kwamashishini, ifuthe lomntu kwindalo esingqongileyo liyanda, elenza ukuba ukhuseleko lwe-ozone luhlale luyehla. Ubuninzi bemitha yelanga efikelela kumhlaba emhlabeni ekukhanyeni kwelanga iyanda, nto leyo isoyikisa ngqo impilo yabantu. Kubomi bemihla ngemihla, ukunciphisa umngcipheko wemitha yelanga eluswini, abantu kufuneka bakuphephe ukubekeka elangeni kwaye baphume ngexesha lokuvezwa lilanga emini, banxibe impahla ekhuselayo, kwaye basebenzise izithambiso zelanga phambi kukhuselo lwelanga, phakathi kwabo Ukusetyenziswa kwezithambiso zokuthambisa ilanga lelona nyathelo liqhelekileyo lisetyenziselwa ukhuselo lwe-uv ukwenzeka komhlaza welanga.
Kwiminyaka yakutshanje, ngokukhawulezisa ukwenziwa kwamashishini, ifuthe lomntu kwindalo esingqongileyo liyanda, elenza ukuba ukhuseleko lwe-ozone luhambe luyehla. Ukuqina kwemitha ye-ultraviolet efikelela kumphezulu womhlaba elangeni kuyanda, nto leyo isoyikisa ngqo impilo yabantu. Kubomi bemihla ngemihla, ukunciphisa umngcipheko wemitha yelanga eluswini, abantu kufuneka bakuphephe ukubekeka elangeni kwaye baphume ngexesha lokuvezwa lilanga emini, banxibe impahla ekhuselayo, kwaye basebenzise izithambiso zelanga phambi kukhuselo lwelanga, phakathi kwabo Ukusetyenziswa kwezithambiso zokuthambisa ilanga lelona nyathelo liqhelekileyo lisetyenziselwa ukhuselo lwe-uv ukwenzeka komhlaza welanga.
Iscreen selanga luhlobo lweekhompawundi eziphilayo kunye nokufakwa okufanelekileyo kwe-UV, okwaziwa ngokuba kukufunxa kwe-UV. Ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo yi-p-methoxy cinnamic acid ester, i-camphor derivatives, i-benzotriazole kunye ne-oakelin, njl. Ihlala isetyenziswa ngokudibanisa ne-sunscreens ezininzi ukomeleza ifuthe lokhuselo lwelanga.
Inkampani inokubonelela ngezongezo zezithambiso ezingezantsi:
UV ABSORBER YIHOO UV3039 6197-30-4 OCTOCRYLENE Isetyenziswe kwiifayile ze-UV-A kunye ne-UV-B kwi-sunscreen kunye nokulungiswa kwamayeza.
YIHOO BP2 131-55-5 Isetyenziswa njengabaphakathi abaxuba amayeza, izixhobo ezinamandla, izinto zokuthambisa ze-UV, njl.
YIHOO BP4 4065-45-6 Isetyenziswa njenge-arhente yokugqiba i-anti-UV, ene-anti-ukuguga kunye nefuthe lokuthambisa kwilaphu lomqhaphu kunye nefayibha ye-polyester.
Isetyenziswe kwi-cream cream, i-cream, i-honey, i-lotion, i-oyile kunye nezinye izinto zokuthambisa.
I-AVOBENZONE 70356-09-1 Isixhobo sokufunxa i-UV, kunye ne-UV-a (> 320nm) yohlobo lwe-UV, enokuthintela ibhendi epheleleyo (320 ~ 400nm) UVA. Sisicoci seUVA sokucocwa kweoyile esinyibilikayo esisebenza ngokugqibeleleyo, ngokudibeneyo kunye nescreen se-UVB, ukubonelela ngokhuseleko olupheleleyo lwe-UVA kunye ne-UVB, oko ke kuthintela umhlaza wolusu we-photogenic.
I-ACID YOKUTHENGA I-OCTYL SALICYLATE 118-60-5 Ikhompawundi ephilayo esetyenziswa njenge-sunscreen kunye nesithako sezithambiso sokufunxa imitha ye-UVB elangeni.
1,2-Hexanediol Ngowama-6920-22-5 Isetyenziswa ngokubanzi kwii-inki zabashicileli beenkjet zombala, izinto zokuthambisa eziphambili kunye nezinto zokwenza imveliso zeshishini lokuxuba.
Xa idityaniswe kumanqaku emihla ngemihla, inokusetyenziswa njengendawo yokugcina izinto ezidibanisayo. Ineziphumo zenzalo kunye nokuthambisa, kwaye ayinampembelelo imbi kwimpilo yabantu.
Egqithileyo Izongezo zeYIHOO ngokubanzi
Okulandelayo: Ii-APIs (Isithako esisebenzayo seMithi)